အသိေပးျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း | Working Friends
အသိေပးျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
2018年4月6日 2018年4月19日 EM
ဒီစကားလုံး(၃)လုံးဟာ ဂျပန်တွေရဲ့ နှုတ်ဖျားက မချတဲ့ စကားပါ။ အရေးပါတဲ့နေရာမှာ ယူထားပါတယ်။အထူးသဖြင့် business manner အဖြစ်…
🌟 ဘာ့ကြောင့် အရေးပါတာလဲ။
အလုပ်ခွင်မှာ ဒီ(報・連・相) သုံးမျိုးသာရှိရင် လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်ပြီး အမှားကင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီး ယူဆကြလို့ပါ။
ဘာတွေလဲဆိုတော့ …(ခေါင်းစဉ်မှာတော့ ပါပြီးသားပါ)
● 報（ほう） – အသိပေးတင်ပြခြင်း၊အစီရင်ခံရီပို့တင်ခြင်း
● 連 （れん） – အကြောင်းကြားခြင်း
● 相 （そう） – ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း
🌟 ပြဿနာတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လား???
-မိမိရဲ့လုပ်ငန်းပရောဂျက်က ထင်သလောက် ရှေ့မရောက်ဘူး
-အထက်လူကြီးဆီမှ “အဲ့ကိစ္စဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲ” လို့ ခဏခဏ အမေးခံရ။
-ကိုယ့်အဖွဲ့ရဲ့ performance နှေးနေတယ်။
စသဖြင့် ပြဿနာအသေးမှ အကြီးကြီးတွေ ရှိတဲ့အခါ
-အလုပ်မတွင်ဘူး။ အမှားများနေတယ်၊လက်ရှိအခြေအနေက… စသဖြင့် အသိပေးတင်ပြ၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကိုပါ လက်ရှိအခြေအနေကို အကြောင်းကြားပြီး ပြဿနာကို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးဖြေရှင်းကြရင်အဖြေတစ်ခုခုတော့ ရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်ထဲ လုပ်နေတာထက်စာရင် အချိန်မကုန်ဘဲ ရှေ့ရောက်မှာပေါ့နော်။
ဂျပန်မှာက အဖွဲ့လိုက် Team Work စိတ်ဓါတ်ကို အလေးပေးသည့်အပြင် လုပ်ငန်းအကျိုးရှိရှိ ရှေ့ဆက်နိုင်အောင် ဒီစကားလုံးလေးတွေကို အရေးပါတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
🌟စကားလုံး အဓိပ္ပာယ်က ဘာဖြစ်မလဲ?
報・連・相 (hou/ren/sou) ဆိုတာက စကားလုံးကို အတိုချုံးပြောထားတာပါ။ သူရဲ့ အရှည်ကတော့
👉報告（ほうこく） – အသိပေးတင်ပြခြင်း
အထက်လူကြီးထံမှ လုပ်ငန်းတာဝန်၊ အမိန့်၊အကူအညီတောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဝန်ထမ်းအငယ်မှ လုပ်ငန်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ၊ရလဒ် တွေကို ပြောပြပေးခြင်း ၊ရီပို့တင်ခြင်း။ ဒီကိစ္စကတော့ မတင်မနေရပါပဲ။
👉連絡 （れんらく） – အကြောင်းကြားခြင်း
အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ၊ မသက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ သတင်းအချက်အလက်ကို အသိပေးအကြောင်းကြားပေးတာပါ။ ရီပို့တင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အခုတော့ ဒီလိုလေးလုပ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော် ။ဝေမျှပေးတာပေါ့။
👉相談 （そうだん） – ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း
တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါ တခြားသူရဲ့ အကြံဉာဏ်တောင်းပြီး၊ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာပါ။ တာဝန်တစ်ခုကို ပထမဦးဆုံးဆောင်ရွက်မယ့်အခါ ၊အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အတွက် ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်း မသိတာတွေရှိပါတယ်။
မသိပဲနှင့် ဆက်လုပ်နေတာထက် သိတဲ့သူဆီမှ အကြံဉာဏ်ရယူတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ မိမိအထက်လူကြီး ၊စီနီယာ စသဖြင့် တိုင်ပင်လို့ ရနိုင်မယ့်သူကို ရှာထားပြီး၊ လုပ်ငန်းအကျိုးရှိရှိ ရှေ့ရောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အဖွဲ့အချင်းချင်းလည်း တစ်ယောက်တစ်ယောက်နားလည်၊ အထက်လူကြီးကိုလည်း မှန်မှန်အစီရင်ခံတဲ့အတွက် အလုပ်ကြိုးစားလုပ်နေပါလားလို့ အကောင်းထင်ခံရပါတယ်တဲ့။
အဓိကကတော့ အသိပေးခြင်းပါပဲ။ စကားနှင့် အသိပေးနိုင်သလို၊ စာနှင့် အသိပေးနိုင်တယ်။ စကားလုံးနှင့် မိမိရဲ့ ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ခွင် ကောင်းမွန်တဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
တကယ်လည်း အရေးပါမယ်လို့ မထင်ဘူးလား။ စာဖတ်သူငယ်ချင်းတို့ ဘယ်လိုယူဆပါသလဲ။
JP LifeWorking in Japan
Previous Previous post: self branding ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အလုပ္ေလ်ာက္ၾကရေအာင္
Next Next post: အလုပ္ရွာမယ္ဆိုဘာေတြျပင္ဖို႔လိုလဲ အပိုင္း(၂)